နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / Refer Generators ၏အမျိုးအစားများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-10-06 မူလ:ဆိုက်ကို
၏ဘောင်reefer မီးစက်အလေးသာသောင်းကျန်းသောဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့်သံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုံးဝပြုလုပ်ထားပြီးအနည်းဆုံး5ဆအားဖြင့်မည်သည့် ဦး တည်ချက်မဆိုမြေထုဆွဲအားအရှိန်ဖြင့်သက်ရောက်မှုနှင့်တုန်ခါမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အင်အားကြီးမားသော box ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တံစဉ်များဆန့်ကျင်ရေးနှင့် anti-anti-anting installation နည်းလမ်းများက၎င်းကိုပိုမိုစိတ်ချရပြီးပိုမိုလုံခြုံစေသည်။ Refer Generators သည်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သင့်တော်သည်။ ဘောင်တွင်ရေနှင့်ဒီဇယ်စက်များ, မီးစက်များ, ဘက်ထရီများ, ဘက်ထရီများ, ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာများနှင့်တူရိယာများပါရှိသည်။ frame frame, frame tank, သတ္တုတံခါး panel, control box နှင့် power output box နှင့်ပါဝါ output output ကိုမျက်နှာပြင်၏အပြင်မျက်နှာပြင်များ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့အား reefer generators အမျိုးအစားများကိုအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးကြစို့။
ဟိုက်ဒလက်စ်reefer generator:၎င်းသည် Kinetic Energy နှင့်မြေထုဆွဲအားအလားအလာရှိသောရေစွမ်းအင်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲစေသောအစွမ်းထက်သောစက်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ရေအားလျှပ်စစ်မီးစက်၏အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာနျူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုမှာနျူကလီးယားစွမ်းအင်သည်ညစ်ညမ်းမှုပိုများလာသည်။
Synchronous reefer Generator - ၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်စွမ်းအားလုပ်ငန်းတွင်ထပ်တူကြိုထိန်းသိမ်းထားသောမီးစက်များကိုရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း, အပူစွမ်းအင်, နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့်ဒီဇယ်စွမ်းအားမျိုးဆက်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
Asynchronous Refer Generator - ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Refer Generators ကိုလည်း \_"induction generators \_" ဟုလည်းခေါ်သည်။ အလှည့်အပြောင်းသံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်ထစ်ရဟပ်နေသော rotoring တွင်ရှိသောသွေးကြောဆိုင်ရာလက်ရှိလက်ရှိအချိန်တွင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအကြားရှိလေထုကွာဟမှုကိုအသုံးပြုသော alternator တစ်ခု။
1reefer မီးစက်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောရေနံ, ရေ, လေ, Refer Generator ၏အစိတ်အပိုင်းများသည်နဂိုအတိုင်းဖြစ်သင့်သည်, ဝါယာကြိုးသည်ခိုင်မာသင့်သည်။
2. ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများတွင်ရာသီဥတုနှင့်ရာသီအလိုက်အခြေအနေများတွင်အပြောင်းအလဲများအရ Reefer Generator သည်လောင်စာဆီနှင့်အင်ဂျင်ဆီကိုသင့်လျော်သောတံဆိပ်များဖြင့်ရွေးချယ်သင့်သည်။
3. ဆီ, လောင်စာဆီနှင့်ကွန်တိန်နာကွန်တိန်နာများကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များအရရေနံ, လောင်စာ, အအေးနှင့်လေကြောင်းလိုင်းများကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးအစားထိုးပါ။ Refer Generator ၏ရေနံစက်၏ပြင်ပလည်ပတ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပုံမှန်ဆီသို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးသင့်သည်။
4. Refer Generator ၏စတင်သောဘက်ထရီသည်အဆက်မပြတ်ဗို့အားအမြဲတမ်းဗို့အားကြာမြင့်စွာရှိသင့်ပြီးရေပေါ်ဗို့အားလစဉ်လတိုင်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
5. Refer Generators ၏ရေရှည်စစ်ဆင်ရေးကိုရှောင်ရှားသင့်ပြီးလောင်စာဆီအဆင့်နှင့်လောင်စာဆီစုပ်စက်များအကြားအမြင့်ခြားနားချက်သည်မကြီးသင့်ပါ။
အကယ်. သင် reefer generators ကို0ယ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ MECCA Power သည် Global Power Support Power Initiative ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်မီးစက်ဒီဇိုင်း, လျှောက်လွှာနှင့်အပြီးတွင်ရောင်းချမှုအတွက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် Mecca Power သည်ကျယ်ပြန့်သော, သို့မဟုတ်အဝေးမှထိန်းချုပ်ထားရလိမ့်မည်။
reefer ဂျင်နရေတာများ 460V reefer မီးစက် reefer generator ကွန်တိန်နာ reefer မီးစက်အပေါ် Clip underslill refer မီးစက် နောက်ဘက်တက္ကစီကွင်းလယ်ကစားသမား reefer မီးစက်အပေါ် 15kw ကလစ် 20ft reefer generator container